Ma vie en abondance | omen’i Jesoa fahefana aho
Lio 10: 17-20
Ny fiverenan’ireo fitopolo lahy
NY FAHEFANA OMEN’I JESOA ANTSIKA
• Fahefana enti-mandresy ny fanahy ratsy (and 19)
« Lioka 10 : 19. Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan’ny fahavalo ianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory. »
Ny menarana sy ny maingoka ary ny fahavalo dia endrika hanehoana ireo herin’ny fanahy ratsy. Manana ny hery handresena ny fanahy ratsy isika kristiana satria efa nomen’i Kristy fahefana. Ireo fito-polo lahy nirahin’i Jesoa dia faly sy nirehareha tamin’izany ka niteny hoe: « Tompo ô, na dia ny demonia aza dia nanaiky anay noho ny anaranao ». Izany hoe: nanaiky an’ireto mpianatra ireto ny demonia noho ny fahefana nomen’i Jesoa azy ireo.
• Fahefana hidirana any an-danitra (and 20)
Lioka 10 : 20. Kanefa aza mifaly ianareo, satria manaiky anareo ny fanahy; fa mifalia, satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo.
Tamin’ny andron’ny faha mpanjaka, rehefa misy fanasana ataon’ny mpanjaka, dia vakiana alohany lisitry ny olona voasoatra anarana ho asaina mialoha ny hidirana ao amin’ny lapam-panjakana. Ka rehefa tsy tafiditra ao anaty listry ny bokim-panjakana dia tsy tafiditra ao na efa niomana fatratra aza.
Tsy latsa-danja amin’izany koa anefa ny fidirana any an-danitra. izay voasoratra mialoha ao amin’ny bokin’ny fiainana ihany no tafiditra ao amin’ny lapam-panjakan’Andriamanitra. Apokalypsy 21 : 27. « Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin’ny bokin’ny fiainana izay an’ny Zanak’ondry ihany. Apokalypsy 20 : 15. Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin’ny bokin’ny fiainana, dia natsipy tany amin’ny farihy afo izy. »
Isika ry havana anisany nomen’i Jesoa io fahefana io rehefa nandray Azy ho Tompo sy Mpamonjy isika. Jaona 1 : 12. « Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery* ho tonga zanak’Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, [*Na: anarana, na fahefana] » . Ny zanak’Andriamanitra ihany no voasoratra ao amin’ny bokin’ny fiainana ny anarany ka manana fahefana hiditra ny an-danitra.
Ka raha milaza i Jesoa eto hoe « mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo » dia midika fa tsy tokony ho ampy hifaliantsika raha mahazo fitahiana ety an-tany fotsiny ohatra hoe: manana izay rehetra ilaina,afaka manasitrana, mahay fahagagana sns. Fa ankoatra ireo dia ataovy azo antoka koa fa efa Zanak’Andriamanitra ianao ka manana fahefana hidirana any an-danitra satria efa voasotra any an-danitra ny anaranao.